ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: Watercolour
စာရေးသူ Unknown အချိန် 3:26 PM
မိုးစက်အိမ် August 6, 2009 at 4:42 PM
ဒီကဗျာလေးကို ငါးခေါက်လောက်ကို ထပ်ထပ်
ဖတ်မိတယ်ဗျာ ... ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ ရှင်းပြ
ပြီး အဓိပာယ် ရှိတဲ. ဖွင်ဆိုချက်တွေ မေးသွားပြီး
နောက်ဆုံး ဘာမှ မရှိ ဘာမှ မေးမရတော.တာအခါ
အရာရာ ဟာ ကွယ်ပျောက်သွားမှာလား ဆိုတာ
တကယ်တော. တစ်ထောင်.တည ပုံပြင်လိုပါဘဲဗျာ
ကဗျာဖတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ စဉ်းစား စရာကိုနက်နက်
နဲနဲ ပေးပြီး အဆုံးသတ်ထားတယ် ... အကိုမေး
ထားတာ တွေက တကယ်. နက်နဲ ခြင်း ပုစ္စာ နောက်
က ဖြေရှင်းဖို.မရှိတဲ. အဘိဓာန်ပေမဲ. ကိုလိုရာဖြေ
ကြမယ်ဆိုလည်း မမှားဘူးလို.ဘဲ ပြောရတော.မယ်အကိုရေ
တကယ်ကို ရေဆေး ပီသတယ်ဗျာ...အများကြီးကို တွေး
မိသွားစေပါတယ် ဗျာ... အားပေးလျက်...
Unknown August 6, 2009 at 5:32 PM
အရမ်း ကောင်းတယ် ဆက်ကြိုးစားနော်
Angel Shaper August 6, 2009 at 8:15 PM
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကဗျာလေးအတွက် ကိုချမ်းရေ ကျေးဇူးကမ္ဘာ။
ကိုရေတမာ August 6, 2009 at 8:37 PM
Unknown August 6, 2009 at 10:51 PM
ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အဓိပ္ပါယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ ခံစားပြီးတော့ ဖတ်သွားပါတယ်နော်။
အနော် August 7, 2009 at 8:08 AM
ရေဆေးက ရေစီးကြောင်းအလိုက် စီးသွားသလိုမျိုး
ဒီကဗျာလေးကလဲ စိတ်ကူးသလောက် တွေးတောမိသွားတယ်
ကဗျာကောင်းလေးနဲ့အတူ တွေးတောမှုလေးတွေပါ သယ်သွားပါတယ်ဗျို့
နေ့ခင်းကတင် အဲ့ဒီ ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေးနေမိတဲ့ အကြောင်းကို စာတပုဒ်ရေးဖြစ်သေးတယ်
အခုတလော အတွေးတွေတူနေကြတယ် ထင်ရဲ့ :P
ဇော် August 7, 2009 at 11:23 AM
ကဗျာလေးရော ပန်းချီလေးရော။ အတော်ကို မိုက်တာ။ လန်းတယ်ဗျာ။
လင်းကြယ်ဖြူ August 8, 2009 at 7:48 AM
ကဗျာလေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲတွဲပြီး ရေးလေ့ရှိတဲ့
ဒီဇိုင်း ကလည်း လန်း..
ကဗျာ ကလည်း လန်း...
မပွင့် လိုပဲ မန့်တော့မယ်
ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားပူနားဆာ လုပ်တိုင်း စိတ်ရှည်ရှည် ကူညီတဲ့မိတ်ဆွေ IT ဆရာကို အထူးကျေးဇူးနော...
နောက်လည်း လုပ်ဦးမယ်..း )
mysterysnow August 8, 2009 at 5:22 PM